Izindaba - METAL CHINA 2020 E-SHANGHAI
Ukugaya i-Steel Shot
Ingxubevange ye-Silicon Manganese
I-METAL CHINA 2020 E-SHANGHAI
Kusukela ngo-Agasti 18 kuya ku-20, i-18th China International Foundry Expo ibibanjelwe edolobheni elihle laseShanghai. Nge-CEO u-Yuqiang Song kanye nemizamo engapheli yabaphathi be-12 elite yokuthengisa ye-Fengerda Group, umbukiso waba yimpumelelo enkulu.
I-Metal China eyasungulwa ngo-1987, lo mbukiso ube ngomunye wemibukiso yezimboni ehamba phambili emhlabeni ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-30 yentuthuko. Umbukiso wemboni kuphela owenziwa inhlangano yezimboni kazwelonke eChina, futhi uthole impendulo enhle nokuxhaswa okuqinile okuvela kumabhizinisi amakhulu asungula kanye nabahlinzeki abaphezulu nabaphansi. Umbukiso uhlanganisa indawo ephelele engaphezu kwamamitha-skwele angaphezu kuka-100,000, kufaka phakathi okungaphezulu Amamitha ayisikwele angama-30,000 wokuphonsa okungafaki okwe-ferrous nokusakaza okukhethekile. Bangaphezu kuka-1,300 ababonisi abaziwayo abavela emazweni angaphezu kwezi-30 nezifunda ezizokwamukelwa. Ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, insizakalo esezingeni lokuqala nezinye izinzuzo, lo mbukiso uzoheha izivakashi ezingaphezu kuka-100,000 eziqeqeshiwe ezivela emazweni angaphezu kwezi-80 nezifunda emhlabeni jikelele ezizothenga futhi zixoxisane
I-Metal China ngumbukiso omkhulu kunayo yonke wemboni e-Foundry e-China, futhi ubanjwa minyaka yonke. Imibukiso ikhava yokuphonsa, isikhunta sokulingisa, izinto zokuphonsa, imishini yokukhipha izesekeli zokulingisa, njll., Futhi yathuthukiswa yaba ngomunye wemibukiso yomkhiqizo oqeqeshiwe futhi onegunya imboni enezincazelo eziphakeme, amazinga aphezulu.
UFengerda usayine ama-oda amahlanu khona lapho, Kuyilungelo elikhulu ukubambisana nenkampani eyaziwayo yensimbi eNdiya. I-Oue Steel shot, Ingxubevange yokugaya isibhamu, i-Stainless shot yinto enhle yokuthengisa embukisweni.
UFengerda ugcizelela umbono wokuthembeka nokusebenza kahle, ekulawuleni ngokuqinile yonke inqubo yokukhiqiza, ikakhulukazi isilawuli sesikhashana kunqubo yokuphazamisa nokucisha, sisusa imikhiqizo yokukhubazeka emgodini womoya ngombono wokuthi "umoya namandla", ukwenza ngcono ikhwalithi yokukhiqiza.
Sikholwa ukuthi imikhiqizo yethu izokwaziwa ngamakhasimende amaningi.
IKHELIIdolobha laseTengzhou, Isifundazwe saseShandong, eChina
ISIKHATHI SOKUSEBENZANgo-8: 00 ekuseni kuya ku-18: 00 ntambama ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo